नेताभन्दा सामाजिक अभियान्ता रकलाकारले देश राम्ररी हाँक्न सक्छन् ।
पछुताउनु पर्ने जीवनमा कुनै भूल गरेजस्तो लाग्दैन मलाई नवल खड्का चलचित्र क्षेत्रमा नायक÷निर्माताको रूपमा परिचित छन् । थुप्रै फिल्मका नायक रहेका उनी अब निर्देशकका रूपमा पनि अगाडि आउने तरखरमा छन् । आफैँले बनाउन लागेको फिल्म ‘काँडेतार’ उनले नै निर्देशन गर्दैछन् । चलचित्र कलाकार सङ्घ,चलचित्र निर्माता सङ्घ नेपाललगायत थुप्रै सङ्घसंस्थाको नेतृत्वमा […]
देउवा सरकारको सफलताका निम्ति काम गर्ने पौडेल पक्षको निष्कर्ष
नेपाली काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको सफलताका निम्ति काम गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । महामन्त्री शशांक कोइरालाको निवास महाराजगञ्जमा बसेको बैठकले समसामयिक राजनीतिक घटना क्रमको विश्लेषण गर्दै यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो । छलफलपछि काँग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसीले भने, ‘नयाँ सरकार निर्माणको स्थिति […]
कमरेडहरु, ओलीको दास बन्ने कि नेकपाको योद्धा ? श्रीकृष्ण अधिकारी ‘विवेक’
श्रीकृष्ण अधिकारी ‘विवेक’ हामी यतिबेला केपी ओलीको असंबैधानिक, अराजनीतिक, निरंकुश अधिनायकवादी कदम र प्रवित्तिका विरुद्ध संघर्षमा छौं। यतिबेला केपी ओलीले हामीप्रति साहानुभूति जनाउनुको अर्थ हाम्रो माया मोह दयाभाव पलाएर होइन। नीति कथामा छल गरी सिकार गर्न शाहाकारी बनेको धुर्त स्यालको बठ्याईंपूर्वक कथा जस्तै कमरेड प्रचण्डलाई पूर्व जनमुक्ति सेना, सहिद परिवार, […]
सर्वोच्चले संसद् पुनस्थापना गर्नेमा शंका छैनःपूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लाल
काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालले संसद् पुनस्थापना हुनेमा विश्वस्त रहन आग्रह गरेका छन्। नेपाल बुद्धिजीवी संगठनको राजनीतिक एवं संवैधानिक अन्तरक्रियामा पूर्वन्यायाधीश लालले संविधानको व्याख्या गर्दा सर्वोच्चले संसद्को पुनस्थापना गर्नै पर्ने बताए। प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा संविधानका दुई धारा उल्लेख गरेकाले राजनीतिक मुद्दा मात्रै भन्न नमिल्ने उनले बताए। प्रधानमन्त्रीले […]
पूर्वसभामुख ढुंगानाको दावीः सडकबाट न्यायाधीश तान्ने दिन आउनसक्छ ।
२७ पुस, काठमाडौं । पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाले अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सदर गर्ने हो भने संविधान खारेजको फैसला पनि एकसाथ सुनाउनुपर्ने बताएका छन् । यद्यपि अदालतले संविधानअनुसार फैसला गर्छ भन्ने विश्वास आफूलाई रहेको बताए । संविधानसभा सदस्य मञ्च नेपालले सोमबार राजधानीमा गरेको अन्तरक्रियामा ढंगानाले संसद पुनर्स्थापना हुन्छ कि हुन्न भन्ने बहस […]
बिचार । नेकपाको सांगठनिक कार्यविभाजन हुँदा पार्टीले मलाई साहित्य, कला तथा संस्कृति विभाग प्रमुखको जिम्मा दिएको छ। नयाँ जिम्मेवारीसँगै हामीले काम शुरु गरेका छौँ। यो विभागले तत्काल पात्र र प्रवृत्तिभन्दा पनि दुई विभागलाई मिलाउने अर्थात् पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीमा रहेका विभागहरुको एकीकरणको काम गर्छ। पूर्वमाओवादीमा यस्ता विभागहरुको सोच थिएन र भिन्दै […]
सुगाैली सन्धि के हाे, कसरी गुम्याे नेपालकाे ६१% भूमि ? (सन्धिकाे पूर्णपाठ)
काठमाडौं। सुगौली सन्धि नेपाल र तत्कालिन इस्ट इण्डिया कम्पनी बीचमा भएको सम्झौता हो। जसबाट नेपाल अङग्रेज युद्धको विधिवत समाप्ति भएको थियो। यो सन्धिमा नेपालले आफ्नो अधीनस्थ भूमिको २ तिहाई भू-भाग गुमाउनु परेको थियो। यो सन्धिमा ब्रिटिश ईष्ट इण्डिया कम्पनी र नेपालबीच २ डिसेम्बर १८१५मा हस्ताक्षर भएको र यसको पुष्टि ४ […]
नेपाल एकताका प्रतीकको अपमान ।बद्रीनरसिंह केसी
विश्वका हरेक आधुनिक राज्यले आफ्नो सृष्टि र स्थितिका लागि प्रलय वा बलिदान भोगेको कोटीमा नेपालको पनि आफ्नै विशिष्ट इतिहास छ। नेपाल र यसको अटुट स्वाधीनता, कसैको कृपाले किस्तीमा हालेर दिइएको होइन; राज्य एकीकरण र राष्ट्र निर्माणको ७२ वर्षको अदम्य संघर्षको राजनीतिक, शासकीय, सांस्कृतिक तथा भौगोलिक उपज हो। यसका लागि हाम्रा […]
ओलीलाई उचालेर संसद भंग र नेकपा फुटाउन सफल भयौं : एसडी मुनि
संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमपछि नेपाल फेरि एउटा राजनीतिक संकटमा फसेको छ। ओलीको कदमको संवैधानिक वैधतामाथि प्रश्न उठेपछि सबैले त्यस विषयमा सर्वोच्च अदालतको फैसला पर्खिरहेको अवस्था छ। पहिलेभन्दा अहिले एउटा कुरा फरक देखिएको छ। आफ्नो सत्ता हल्लिनुमा ओलीले यसपटक भारतलाई दोष दिएका छैनन्। उनले आफूलाई सरकार सञ्चालनमा […]
सरकारका दुईवर्ष निराशाजनकः विश्लेषक आचार्य
काठमाडौँ। सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाले स्थायी सरकार गठन गरेको दुईवर्षको कामकारवाही सन्तोषजनक नभएको मात्रै होइन, घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका कामहरु समेत हुननसकेको विज्ञहरुले बताएका छन् । भ्रष्टाचार, सुशासन, मौलिक अधिकारको संरक्षण, विकास निर्माण संघीयता कार्यान्वयन लगायतका क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार नभएको कतिपयले बताएका हुन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नेतृत्वमा गठित नेपाल […]